Mummichi ministera ethiopia Haylamaram dassalany jiila guddaa waliin biyya Sa’udi boqannaaf galani jiraachun isaanii gabaafame jira. – Welcome to bilisummaa
Mummichi ministera ethiopia Haylamaram dassalany jiila guddaa waliin biyya Sa’udi boqannaaf galani jiraachun isaanii gabaafame jira.
Mummicha ministera ethiopia kanaa walin itti gaafatamaan waraana ethiopia wali-galaa Saamoraa Yonis fi Ministera dinaggey fi guddina ethiopia Abdul-aziiz Mohammed fi Ministera raayyaa ethiopia fi itti gaafatamaan nagenya wali-gala ethiopia kan waliin jiran tahuun gabaafame jira.
Wayta bufata dirre xayyara waraana Sa’udi magaalaa riyaad qubatan kan isaan simate itti aanaa moticha Sa’udi arabia Mohammed bin Naayif tahuun hubatame jira.
Previous Oromia-Addis Master Plan: An agenda not like EPRDF
Next Lolli addnuyaa 3ffaa eysatti egalama laataa.?